विदेशमा रहेका ४ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने, कुन देशमा कतिले गुमाउँदैछन् रोजगारी ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/विदेशमा रहेका ४ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने, कुन देशमा कतिले गुमाउँदैछन् रोजगारी ?
जेठ ५, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड –१९० को कारणले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु मध्ये करिव ४ लाखले रोजगारी गुमाउने अवस्था देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको एक अध्ययनले मलेसिया र युएईबाट ३०र३० प्रतिशत नेपालीले रोजगारी गुमाउने अवस्था देखिएको जनाएको छ ।
रोजगारी गुमाउने मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र युएईमा रहेकाहरु रहने संघले आकलन गरेको छ । २०७६ सालको फागुन महिनासम्म श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४२ लाख २५ हजार ७८१ पुरुष र २ लाख ४० हजार ८४ महिला गरी ४४ लाख ६५ हजार ८६५ जनालाई श्रम स्वीकृती दिएको छ । श्रम स्वीकृती वाहेक पनि अध्ययन गर्न र भ्रमणका गएका नेपालीहरुले समेत विदेशमा काम गरि रहेका छन् ।
ति मध्ये मलेसिया सहित खाडीका देशमा करिब १८ लाख ३७ हजार ५ सय नेपाली कार्यरत रहेका संघले आकलन गरेको छ जस मध्ये करिव ४ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने देखिएको संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले जनाकारी दिए । मलेसियामा १ लाख ५० हजार, युएईमा १ लाख २० हजार, साउदीमा ७९ हजार ८ सय जनाले रोजगारी गुमाउने देखिएको संघको ठहर छ त्यस्तैगरि कुवेतमा १२ हजार, बहराइनमा ४२ सय, ओमानमा १७ सय ५० जनाले रोजगारी गुमाउने संघले आकलन गरेको छ ।
यूएईको अर्थतन्त्र तेलमा मात्र आधारित नभएको र त्यहाको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेकाले सन् २०२१ मा यूएईको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । नेपाली कामदारले रोजगारी पाइरहेका होटल, रेष्टुरेण्ट, सुरक्षा गार्ड, मल अन्य सेवा क्षेत्रको व्यापार राम्रो रहेकाले प्रक्षेपण गरिए अनुसारको वृद्धिदर कायम रहेमा यूएईबाट भित्रिने विप्रेषणले निरन्तरता पाउने अवस्था रहेकोमा कोरोना भाइरस माहामारीको कारणले यो सम्भावना अन्त्य भएको छ । प्रकोपका कारण निजी क्षेत्र धराशायी हुने वातावरण देखिए पनि त्यहाँको सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने हिसाबले पनि रोजगारीमा असर गर्ने देखिएको छ । कोरोना महामारीको कारणले होटल, रेष्टुरेण्ट, सुरक्षा गार्ड, मल तथा अन्य सेवा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएकाले यूएईमा कार्यरत रहेका ४ लाख मध्ये करिब ३० प्रतिशत कामदारहरुले रोजगारी गुमाउने देखिएको संघले जनाएको छ ।
तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएको साउदी अरेविया कोरोनाको महामारी र पेट्रोलियम पर्दाथमा आएको मूल्यको गिरावटले गहिरो आर्थिक संकटतर्फ धकेलिदैछ । कोरोना ९कोभिड–१९० भाईरसका विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र तेलको मुल्यमा आएको गिरावटले साउदी नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति त्यहाँको सरकारले लिएको छ । सरकारले अघि नै साउदी कम्पनीहरुले रोजगारीमा साउदी नागरिकलाई रोजगारी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र दश जना भन्दा वढी कामदार रहेको प्रतिष्ठानमा निश्चित प्रतिशत साउदी नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट साउदीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने सम्भावना देखा परेको छ । साउदी अरेवियामा कार्यरत रहेका ३ लाख ८० हजार मध्ये करिब २० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरुले रोजगारी गुमाउने देखिएको संघले छ ।
कतारले पेट्रोलियम निर्यातमा निर्भरता कम गर्दै व्यापार, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रतर्फ आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः विविधीकरण गर्दै लगेको छ । सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि कतारको निर्माण क्षेत्रमा उच्च वृद्धि कायमै रहे पनि अन्य सेवा क्षेत्र सुस्ताउने देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा कतारको अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले वृद्धि हुने र मध्यम अवधिमा ३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसले रोजगारीको आशा बढाएको थियो । तर परिस्थिती बदलिएको छ । पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य गिरावट र कोभिड १९ को महामारीको कारणले पर्यटन व्यबसाय बन्दको अवस्था छ । जसका कारण कतारमा रहेका ४ लाख २५ हजार मध्ये पनि करिब २० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरुले रोजगारी गुमाउने देखिएको संघले छ ।
कुवेतमा झन्डै ८० हजार नेपाली कार्यरत छन् । यसमध्ये १२ देखि १५ हजार गैरकानुनी कामदार रहेको अनुमान गरिएको छ । घरेलु महिला कामदार सवै भन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा रहेका छन् । कोभिड १९ को रोकथाम गर्न भनि झन्डै ३ महिनादेखि लकडाउन गरेको कुवेतले गैरकानुनी कामदार फिर्ता गर्ने नीति लिएकाले कुवेतमा करिब २० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने देखिन्छ ।
ओमनको अर्थतन्त्र तेलमा निर्भर भएकोले कोरोनाको महामारी र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले ओमन पनि गहिरो आर्थिक संकटतर्फ धकेलिदैछ । ओमन सरकारले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुत्याउन नगरपालिकाको कर, सरकारी शुल्क र औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि भाँडा भुक्तान आउदो ३ महिनाको लागी स्थगित गरेको छ । ओमनमा झन्डै १७ हजार ५०० नेपाली कामदारहरु तेल, ग्यास, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन । ओमनमा घरेलु महिला कामदार सवै भन्दा धेरै गैरकानुनी रुपमा रहेका छन । ओमनमा कार्यरत करिब १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने देखिन्छ ।
जिसीसी राष्ट्रहरुमध्ये आकर्षक गन्तब्य बहराइनको मुख्य आय स्रोत पर्यटन हो । बहराइनमा मुख्यत सेवा क्षेत्रहरु, होटल र रेस्टुरेन्टमा नेपाली कामदारहरु कार्यरत छन । खाडी राष्ट्रहरुमा सबै भन्दा धेरै कोरोना भाईरसबाट प्रभावित मुलुकमध्ये बहराइन पनि एक हो र सबै भन्दा धेरै ल्य ध्यचप ल्य एबथ मा बस्ने कामदारहरु पनि बहराइनमा छन । बहराइनमा रहेका ३५ हजार मध्ये करिब १२ प्रतिशतले रोजगार गुमाउने आकलन गरिएको छ ।
मलेसियाको अर्थतन्त्र कृषि, पयर्टन र औद्योगिक उत्पादनमा निर्भर छ । मलेसियाका उद्योगहरु निर्यातमा निर्भर रहेका र विश्वमा आउने आर्थिक मन्दिको कारणले माग घटन गई धेरै उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था देखिएकोले मलेसियामा धेरै रोजगारी गुम्ने संभावना छ । मलेसियामा पयर्टन तथा सेवा क्षेत्रमा तत्काल रोजगारी सिर्जना नभए पनि स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण, मास्क, पञ्जा र अन्य चिकित्सा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र खाद्यान्न उत्पादन जारी रहेकाले नेपालीहरुले रोजगारी गुमाउने संभावना खाडी मुलुक भन्दा न्युन रहने आँकलन गरिएको छ । मलेसिया हाल रहेका करिब ५ लाख मध्ये ३० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने आकलन संघले गरेको छ ।